Izibonelelo zegels | Amadoda aQinisekileyo
Kukho ubuninzi beemveliso ezivela ubuhle eyamadoda. Iziqholo, iimveliso zeenwele, ukufihla izithambiso, ukukhathalela emva kokucheba ... iigel geza ubunewunewu obenzelwe ngokukodwa amadoda. Masibone ukhetho lwezona zilungileyo.
Ukuba udiniwe ngu iigel geza kuthengwe kwiivenkile ezinkulu, ezo zonke zinencasa efanayo, ezicaphukisa ulusu kwaye zingashiyi naluphi na uhlobo lwesiqhumiso ekugqibeleni, kuya kufuneka ukhethe ijeli yeshawari "ubunewunewu". Xa sisithi "ubunewunewu", sithetha ngegels zeshawari ezinikezelwa ziimpawu zodidi ezithandwayo, kunye neegel ezivela iziqholo umdali.
Olu hlobo lwejeli kuhlamba ihlala ibiza kakhulu kunezoqhelekileyo, kodwa kukho isizathu soko. Ukubunjwa kwayo kuhlonipha kakhulu i-epidermis. Amafutha ayo ahlala eluswini. Kwaye bahlala benikezela ngokudibanisa: ngcono i-hydration, imvakalelo yokutsha, amandla okwenza amandla, ukusetyenziswa kabini kuzo zombini umzimba yena ke iinwele.
Umzekelo, ukhetho lwethu lukhetha ijeli yeshawari Dior indoda Sport. Le mveliso inikezela ngesiqholo somzimba esomeleza ulusu enkosi kubukho bezicatshulwa ze i ginger ekubunjweni kwayo.
Ukuba ufuna ukunqanda ukuba nebhotile yejeli kuhlamba kunye nebhotile ye-shampoo, iimveliso ezibini nganye (umzimba kunye neenwele) ezivela ingcwele Igama Laurent. Chanel kunye UJean Paul UGaultier kufuneka ubathande. Okokugqibela, ukuba ukhetha iisepha ukuhlamba iigels, ifirm Tom Ford yenye into elungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ijeli yeshawa yokuhombisa yamadoda
Oobhaka besikhumba babuya kwifashoni kule ntwasahlobo
Iakhawunti ezili-12 ze-instagram kufuneka uzilandele ukuba unomdla kwifashoni yamadoda